foodpanda အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
22.9.1 for Android
4.2 | 1,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（33.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် foodpanda - Food & Groceries
foodpanda သင့်ရဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းပိုမိုနီးကပ်စွာဆောင်တတ်၏ - ။ အမိန့်စားသောက်ဆိုင်, စျေးဆိုင်, ဒါမှမဟုတ် pandamarket
သငျသညျအပျနှံရချင်ပါတယ်တစ်စုံတစ်ရာကျနော်တို့ကတယ်။ တစ်ဦးဂန္ဘာဂါသို့မဟုတ်စူပါလတ်ဆတ်တဲ့ဆူရှီ, သစ်သားပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပီဇာများအတွက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်? ငါတို့သည်သင်တို့၏မြို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်သောအစားအစာများအတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာကိုငါသိ၏။ ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးကိုက်ခြင်းနှင့် download, ယခုယူ - foodpanda သင့်ရဲ့မြို့အတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာဖြန့်ဝေဝန်ဆောင်မှုပါ! သင့်ရဲ့လမ်းနေအိမ်ပေါ်တွင်စျေးဝယ်တက်ကောက်ဖို့မေ့နေပါသလား? ကျနော်တို့က flash ကိုအတွက်အစားအသောက်နှင့်အစားအသောက်ဆိုင်ကယ်နှုတ်တော်မူ - ဘာပဲသင်နေပြီးနောက်။ ဒါဟာသင်အကြိုက်ဆုံးဒေသခံစားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ထိုနေ့ကုန်စုံပေးပို့နှင့်သန့်ရှင်းရေးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအနေဖြင့်တစ်ဦးမုန့်ညက်မယ့်ဖြစ်စေ, သင်လိုချင်သောအရာခပ်သိမ်း, လိုအပ်ကြောင်းသို့မဟုတ်သင့်အိမ်တံခါးမှတောင်းပန်ညာဘက်ကိုရောက်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေနို့? ဘက်ထရီ? ဆပ်ပြာ? foodpanda အပေါ်စျေးဆိုင်တွေနဲ့ထုတ်ကုန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထံမှအမိန့်။ ဒါဟာချောင်းမြောင်းမပါဘဲအွန်လိုင်းကုန်စုံပေးပို့ပါတယ်။ ဆေးဝါးနှင့်အပင်အီလက်ထရွန်းနစ်မှအစားအသောက်ဆိုင်ကနေအချိုရည်ဖို့ကျန်းမာရေးကိုအရာရာအဘို့သင့်အကြိုက်ဆုံးဆိုင်များကိုရွေးချယ်ပါ။
ပထမဦးစွာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်, သင့်လိပ်စာ (အိမ်မှာ / ရုံး / treehouse) ရိုက်ထည့်ပါ။ ထို့နောက်သင်အကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရွေးချယ်ကာအမိန့်ထားပါ။ သူတို့အဆင်သင့်ပါပဲတခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သားသငျသညျသူတို့ကိုဆောင်တတ်၏, သင့်ပစ္စည်းများပြင်ဆင်ပြီး။ သငျသညျကွညျ့ရှုဖို့တစ်ခုခုလိုအပ်လျှင်, သင် Real-time ၌သင်တို့၏မြင်းစီးသူရဲကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုပြန်ထိုင်နှင့်ပျော်မွေ့။
, foodpanda သင်အနီးရှိအကောင်းဆုံးအစက်အပြောက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအထူး
စေသည်ဘယ်အရာကို။ ပီဇာသို့မဟုတ်ဆူရှီ? ကုန်စုံဆိုင်များသို့မဟုတ်လက်ဆောင်တွေ? သင်ကိုချစ်အခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ချွေနေချိန်တွင်သငျသညျအပြီးနေမည်သို့ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်းစီးသူရဲတစ်ဦးအပြုံးနှင့်အတူသင့်ရဲ့အိမ်တံခါးမှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ထင်သောအရာကိုသိရန်လိုခငျြရှေ့တော်၌, သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအမိန့်ထုတ်ပြီးပြီဆိုပါကကျွန်တော်တို့ကို
အသငျသညျမှ real-time စကားပြောပါလိမ့်မယ်, အလည်အပတ်ခရီး
https://www.foodpanda.de - ကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီ Center ကအပိုင်းမှာသင့်ရဲ့အစားအစာကိုအတှေး / ဝန်ခံချက် Give
Grocery shopping isabreeze with your new bestie, Pau-Pau!
Working at foodpanda Singapore!